Switkwụ mgba ọkụ & Clip orddọ Manufacturers, Suppliers - China Footkwụ Gbanye & Clip orddọ Factory
Igwe anaghị agba nchara Tattoo pedals
Aha ngwaahịa: igwe anaghị agba nchara pedal (nnukwu na obere) Nnukwu: nha ụkwụ: 70 * 105 * 25.5mm nha nha: 120x80x72mm Obere: Ntanetị pedal: 60 * 76 * 25.5mm nha nha: 103x75x62mm Nnukwu: Net nha: 284g Nnukwu ibu: 311g Obere: Ntanetị nha: 261g nnukwu ibu 285g Ogologo USB: 2m Ebe a na-ere: 1. Ngwongwo igwe anaghị agba nchara, ibu zuru oke, agaghị agba nchara, na-eyi akwa na-adị mfe ma dịkwa mfe ọcha; 2. E nwere pad na-echebe pad n'elu na elu pedals, na-abụghị ileghara imewe, adụ ụkwụ obi, nwere ike bette ...
Ihe mgbochi roba na-egbochi iwepụ na grooves n'elu maka ndozi ka mma. Ihe nkwụnye ekwentị na-ejikọ na ike egbugbu ike ọ bụla. Nkọwapụta: Agba: Ihe ojii: Akpụ ogologo rydọ: Dị nso. 1.5m / 5ft Ndepụta ngwugwu: 1 * attkwụ Switkwụ Mgbanwe Switkwụ Packkwụ &gwọ & Nyefe Iji hụ na nchekwa nke ngwongwo gị, ndị ọkachamara, ndị na-eme gburugburu ebe obibi, ndị na-adaba adaba ma na-arụ ọrụ nkwakọ ngwaahịa. Ozi mbupu 1. you na-ebupu mba ụwa niile? Ee, anyị na-arụ ọrụ na iweta WJX eve ...
Gburugburu 360 ogo Tattoo Machine switchkwụ mgba ọkụ Pkwụ Pedal
Agba: oji 1. pedals ogo 360, jikọtara ya na waya silica dị nro, ogologo waya bụ mita 1.75; 2. designkpụrụ na-enweghị mmịlị na ala na-eme ka ọnụ ọgụgụ nke esemokwu dị na ala dịkwuo mma, ọ gaghị enwekwa nsogbu nke ije ụkwụ n'oge egbugbu; 3. Igwe ọkụ kpakpando ise akọwapụtara, micro-movement ọhụrụ (pịa imeghe, pịa ka emechi), dị mma maka njedebe dị elu ma na-adịgide adịgide, Iji ihe ndị dị elu, ọdịdị mara mma; 4. Kacha nwalere tupu ịhapụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe; 5. swkwụ sw ...
Ọkachamara Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Gbasara Controlkwụ
Pedkwụ ụkwụ ụkwụ igbu egbugbu bụ mgbanwe dị mkpa maka egbugbu. Ọ nwere ụdị mgbanwe ọkụ dị elu, yana ụkwụ gị na-azọkwasị ya, ọ ga-eme ka igwe egbugbu ahụ nwee ike. Alloy ihe, na-aghọta n'ezie 360 ​​Celsius niile gburugburu ngwa ngwa conductivity, ọ dịghị akụkụ nwụrụ anwụ. Atụmatụ: Alloy ihe, na-aghọta n'ezie 360 ​​Celsius niile gburugburu ngwa ngwa conductivity, ọ dịghị akụkụ nwụrụ anwụ. Mee ka ụkwụ gị dị mma nke ukwuu, dị mfe ịkwaga, belata ike ọgwụgwụ nke onye na-egbu egbu. 65 iberibe ọla ọcha ọla kọpa na ike eletriki conductiv ...
Ọrụ: Professionalkwụ ụkwụ ụkwụ ọkachamara maka inye ike Aha: Tattoo footpedal Ngwugwu gụnyere: 1pc Agba: ga-ezite site n'enyemaka Anyị Uru Anyị nwere ihe karịrị afọ 10 nke ngwaahịa ndị ebupụtara na Europe Market USA .Anyị bụ Tatoo Supply Team, nnabata obi ụtọ ịnabata obere OEM iwu. Ezigbo nkwurịta okwu, Ọrụ kachasị mma, Ogologo nkwa nke obere ụlọ ọrụ nrụpụta ahịa dị ọnụ ala! OEM na-anabata. Mbupu: 1. N'SHWA MB SH. 2. Iwu esichara n'oge mgbe ugwo nkwenye. 3. Anyị ...
Item aha: Tatoo ụkwụ ụkwụ nwere ụdị ụdị egbugbu ụkwụ ụkwụ atọ. Tatoo ụkwụ pedal bụ uwe na ike ọkọnọ na egbugbu igwe. Ọ dị mfe ịrụ ọrụ na iji, dị fechaa, dị mfe ibu. Ime ka egbugbu gị rụọ ọrụ dịkwuo mfe ma dị mfe. Ndị ọkachamara na-enye egbugbu maka ndị na-ese egbugbu. Atụmatụ: Ọdịdị mara mma na imewe. Adabara ụdị ụdị egbugbu igwe dị iche iche. A na-eji akara mgbatị ụkwụ iji chịkwaa igwe ọkụ egbugbu. Jikọọ akara bụ ogologo oge iji conn ...
High Quality Tattoo Machine Footkwụ Gbanye Pkwụ Pedal njikwa Power Tụkwasịnụ
Ihe mgbochi roba na-egbochi iwepụ na grooves n'elu maka ndozi ka mma. Igwe ihe ntanye na-ejikọta na ike egbugbu ike ọ bụla. A na-eji pedal ụkwụ eme ihe iji chịkwaa igwe ọkụ ike igwe egbugbu. Ogwe ụkwụ a bụ ezigbo mma ma dị mma. Ndepụta ngwugwu: 1 * attkwụ Mgbanwe Footkwụ Mgbanwe Switkwụ Ọrụ Anyị 1. Ihe ntinye awa 2 na-enye. 2. A ga-aza ozi ịntanetị niile n'ime awa 24. 3. Sample ego ga-nkwụghachi ozugbo iji enen. Ajụjụ 1. Olee otu m ga-esi nweta ihe nlele iji chọpụta ngwaahịa mma? ...
Ngwaahịa a dị mfe iji wee rụọ ọrụ nke ọma maka gị. Kedu ihe kpatara na ị gaghị elebe anya ugbu a? Atụmatụ: Ihe na-abụghị skid na mgbochi marring, chebe gị na ala gị. Black nwere imewe akụkụ anọ dị mfe, akụrụngwa dị mma maka egbugbu. Inogide ma dị mfe iji, nhọrọ kachasị mma maka ime ụlọ mma. Light na spacing-azọpụta, na-arụ ọrụ nke ọma n'ihi na ị. Zuru oke maka ụdị egbugbu ụdị niile. Nkọwapụta: Typedị: attkwụ Tkwụ edkwụ Pedal Ihe: Plastic Nkebi Size: Ruru. 9 * 6 * 2cm / 3.5 * 2.4 * 0.8in (L * W * H) Item Ibu: Ap ...
Gburugburu 360 Star Tattoo Foot Switch Pedal Stainless Steel Pedal For Tattoo Machine Tattoo Power Supply Specification Nke a Footkwụ Footkwụ Pedal / switchkwụ mgba ọkụ bụ ezigbo ọkachamara ụkwụ ụkwụ ụkwụ na-arụ ọrụ nke ọma! O nwere mgbanaka ụkwụ-mgbapụ nke nwere skid, na-abụghị alụ ọgụ. Kwesịrị ekwesị maka ụdị ike ọkọnọ Tattoo niile. Njirimara Ejiri ụkwụ egbugbu elu-elu, ejiji! Ọkachamara ọkachamara, ụkwụ ụkwụ na-agbanwe ụkwụ na mgbochi skid, ntọala na-abụghị marring. Inogide, kọmpat, mfe na-ebu na iji ...
Anyị na-elele nkụji ụkwụ maka ụkwụ 360Â ° Star Tatoo Pedal Pedal na ụdọ 5′ft na nkwụnye ekwentị 1/4 ″. Njirimara ndị na-abụghị ndị skid. Ọ dị mfe ịnweta imewe na-enye njikwa igwe dị mma. Anyị nwere ọtụtụ nhọrọ nke ngwa na ngwa ịhọrọ site na. Njirimara Ama: Ọnọdụ: Ọhụrụ New 360Â Celsius Star Kere attkwụ Footkwụ edkwụ Pedal Ogologo: 5 :ft Agba: Silver Standard 1/4 ″ igwe anaghị agba nchara-nkwụnye ekwentị. Ugbo ala mgbochi na-abụghị skid. Dimension: 3 Â½ ”x 3 Â ...
Weave Tattoo Clip Cord & RCA ụdọ
Igwe ihe eji egbu egbu kachasị ọhụrụ bụ silicone clip cord & RCA cord 6 ụkwụ ogologo (ihe dị ka 180 cm) Ọkpụrụkpụ: ihe dịka 6 mm ogo dị elu 100% silicone dị nro, 22 AWG waya ọla kọpa A na-etinye isi njikọ njikọ ọ bụla n'ime eriri plastik iji gbochie mmebi aha: Tattoo Clip Orddọ, RCA Materialdọ Ihe: Silicon / Copper Use: For tattoo machines Agba: Black Yellow Green Blue Purple Red FAQ 1. Kedu ka mbukota? - MOLONG Tattoo Brand ngwugwu, Neutral ngwugwu, OEM ngwugwu (Nnukwu ibu) E Nwere 2. Olee banyere àgwà? - Qu ...
Net arọ: 27g Gross arọ: 38g Size: 2m * 1.8mm mbukota: opp bag nkwakọ Agba: atọ na agba nwa - red gburugburu - acha anụnụ anụnụ Interface: RCA interface Uru: 1. A ibu-mma nko akara na mgbe nile ịke, ezi mma na àgwà siri ike; 2. Ọla kọpa interface, ọkwa dị elu, na-eyi na-eguzogide ọgwụ; 3. Ọkọlọtọ zuru ụwa ọnụ, ị nwere ike ịzụta ma jiri obi ike mee ihe; 4. The interface silicone na-thickened, mgbochi okpukpu na mgbochi mgbape; Ajụjụ Q Gịnị banyere oge nnyefe? A nnyefe oge bụ 3-5 ụbọchị bú ...